ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းနေပြီလား.......... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 22/03/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နေ့ရက်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါမယ်။ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ မပြည့်ဝတဲ့အခါ နေထိုင်မကောင်းတာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြပေးမယ်နော်။
ပိုတက်ဆီယမ်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာလုပ်ပေးလဲ…………….
ပိုတက်ဆီယမ်က ခန္ဓာကိုယ်ကြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က
ဆဲလ်တွေကို လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ အပြည့်အဝ ရရှိစေဖို့
အာရုံကြောကို ပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေ သိရှိလက်ခံနိုင်စေဖို့
နှလုံးက ဆဲလ်တွေကို ကျန်းမာစေဖို့
သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးဖို့အတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ဇာတ်လိုက်က ပိုတက်ဆီယမ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုတက်ဆီယမ် နည်းနေတယ်ဆိုတာ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုတက်ဆီယမ် နည်းနေတယ်ဆိုတာ သွေးတွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းနေတဲ့ အခြေအနေကိုခေါ်တာပါ။ ဒီအခြေအနေကို hypokalemia လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ် လုံလောက်မှု မရှိတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေက ပိုတက်ဆီယမ်ကို နည်းစေနိုင်တာလဲ……….
ပိုတက်ဆီယမ်ကို နည်းစေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ချက်မက ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကို နည်းစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေကတော့
ကျောက်ကပ် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တာ
အက်ဒရီနယ်လင် ဂလင်းကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တာ
ဆီသွားစေမယ့် ဆေးတွေသောက်သုံးနေရတာတွေကြောင့် ပိုတက်ဆီယမ် ဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းတာကို အဓိကဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက စားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုနည်းနေတာကြောင့်ပါ။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတာကတော့ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အပြုအမူတွေထဲမှာ အခုလို အပြုအမူတွေကို လုပ်မိနေတာပါပဲ။
ဆီးရွှင်စေမယ့် ဆေးတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သောက်သုံးနေရတာ
ပန်းနာရင်ကျပ် သက်သာစေမယ့်ဆေးတွေ အသုံးပြုနေရတာ
မဂ္ဂနီဆီယမ် ပြည့်ဝအောင်မစားသုံးမိတာတွေကြောင့်လည်း ပိုတက်ဆီယမ်နည်းတဲ့ပြဿနာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ကတော့ ကိုယ်တွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းနေတာကို သွေးစစ်တာကနေတဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းတဲ့အခါ လက္ခဏာက တစ်ခုမက ပြတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ် နည်းလာတဲ့အခါ
စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ နှလုံးခုန်နှုန်းက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဒါက သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ် နည်းပါးမှုရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးသော နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေက အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက ဘာတွေများလဲ…………..
ပဲ စတာတွေက ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေပါ။ နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ၂ မျိုးလောက် ပါအောင် စားသုံးရင်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။
What is Hypokalemia? https://www.webmd.com/digestive-disorders/hypokalemia#2 Accessed Date 19 March 2020
14 Healthy Foods That Are High in Potassium https://www.healthline.com/nutrition/high-potassium-foods Accessed Date 19 March 2020
Low Potassium Levels in Your Blood (Hypokalemia) https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17740-low-potassium-levels-in-your-blood-hypokalemia Accessed Date 19 March 2020